Hiran State - News: Heshiisyadan reer Mudug kala saxiixanayaan dalka intiise kale maxaa u diiday oo maamulada kale loola dagaalayaa?
Heshiisyadan reer Mudug kala saxiixanayaan dalka intiise kale maxaa u diiday oo maamulada kale loola dagaalayaa?
Somaliya:- Heshiisyadan ay kala saxiixayaan reer Mudug oo aan loo saxiixeyn maamulada kale ee ay Hiiraan State ugu horeyso ka bogo si aad waxa dalka ka socda u fahamtaan hadii aad tahay reer Hiiraan.'
Dad badan ayaa malinkasta maqla dowlad goboleed waxaa noqon kara labo gobol iyo ka badan iyadoo la ogyahay in Hiiraan ka mid tahay goboladii ugu horeyey ee aan la kala goyn marka waxaa isweydiin leh kuwa heshiishkan loo saxiixayo ma labo gobolaa? Hadii aad reer Hiiraan tahay amaba ay wadanka mar hore kuugu danbeysay waxaanu soo bandhigeynaa waraaqo ay ku saxiixan yahiin masuuliyiin aanu ka xusi karno Shariifka kedibna siyaasada Somaliya meesha ay mareyso aqligada la gaasho iyo sida shaqsiyaad masuuliyad ku magacaaban ay dagaal aan qarsooneyn ugula jiraan bulshada Hiiraan.
Dad badan ujeedada ay bulshada Hiiraan ula dagaalayaan sida uu afkiisa ka qirtay Shariifka shir uu dhawaantan la yeeshay mid ka mid ah beelaha Hiiran waxey tahay si dadka loo cadaadiyo kedibna loo yiraahdo SH/dhexe ayaa Hiiraan lagu darayaa amaba gobol kale ayaa Hiiraan la raacinayaa.Hadaba runtii waxey shaqsiyaadkaasi iska luminayaan waqti waayo Hiiraan waxey mustaqbalka ku darsoomi kartaa gobole kale marka iyada oo hada ah 3 gobol loo ogolaado sida goboladii iyada la midka ahaaba loo kala googooyey. kedib shacabka Hiiraan ayaa loo madax banaaneynayaa cidii ay la midoobayan mustaqbalka amaba waxaa laga ansaxin doonaa golaha deegaanka oo ay bulshada Hiiran yeelan doonaan.
Marka TFGda yeyesan xaafado aanu ognahay inuu hal qoys degan yahay heshiisyo aan sida muuqato mustaqbalka hirgali doonin oo hada uun laga leeyahay sidii Galmudug shirka wadatashiga Garoowe u soo camiri laheyd dadka degaankaasina lagu lugooyn magacii dowlad nimone lagu ciyaarin ee waqtiga TFG u harsan ha isku dayano iney kasbadaan shacabka kunool dalka intiise kale intii ay masuuliyiintu fikirkooda ku soo koobi lahaayen qancin iyo hebel reer Mudug ayaanu isku nahay.
Marka la eego magaca Galmudug magac ahaan waa Mudug iyo Galgaduud hadane magaalada ugu dhaw waa Cadaado iyaguna kama mid ahan maamulkaan Galmudug marka waa ayo shacabka la qaldayo oo markasta la lugooynayo marka aad aragtaan saxiixyo ka soo baxa kuwa maanta hor boodayo TFGda sida war bxintan ka muuqata?
Cidii waqti iskaka lumin laheyd siyaasadahan kooxeysiga ku dhisan iyadey jirtaa laakinse reer Hiiran maamul Hiiraan State la yiraahdo ayey sameysteen isagaas ayaana Hiiraan mustaqbalka ka hirgalidoona amaba Shariifka hala dagaalo ama ha wanaajiyo isagey u taal. waxaanu sameysanay kana dhignay Hiiraan 3 gobol midna ay caasimada u tahay degmada Jalalaqsi., midna Bulo Burte mida kalena Belet weyn marka reer Hiiran ayaa laga rabaa sidey inta ka dhiman maamulka u soo dhameyns tiri lahaayeen.
Hadeyba dhacdo in reer Hiiran mustaqbalka ay shacab Somaliyeed ku darsooman shacabka Mareeg ayaa ugu dhaw waayo Hiiran waxkasta wey u dhan yahiin waxey u baahan tahay ookaliya Bad amaba deked iyagane howlo badan ayaa sugayo.
Hadaba qoraalka iyo heshiisyada ay kala saxiixdeen reer Mudug hoos ka aqri markaad aqrisona isweydii waxa Hiiraan oo ka baaxad weyn loogu diidayo horumarka hadii ay Somalinimo jirto? hadii xitaa TFG diidan tahay HS maxaa gargaar loo gaarsiin waayey bulshada Hiiraan? Hadii magaca dowlada in la gaarsiiyo la doonayo Hiiraan maxaa ciidankaan Shabaab dagaalka kula jira 2 sano loo gaarisiin waayey saadka ay u baahan yahiin ee loo geeyey gobolo ay Hiiran deris la tahay?
Maxaa hadiiba ay jiraan cid ka soo horjeeda masuuliyiinta Hiiraan State ay ula heshiisiin waayeen cida ka soo horjeeda hadiiba Shariifka iyo kuwa ka ag dhaw ay dalka hogaamiyaan? Shariifka maamulkii uu yiri waxaan u dhisay in aan HS ku carqaladeeyo ee Dooxada Shabeele maxuu isagaas xitaa aqoonsi u siin waayey amaba ula shaqeyn waayey? bal jawaabta saxda ah hadii aad wax fahmeyso aqligaada la kaasho.waliba reer Galmudug wey ogyahiin in aysan horumarka ay bulshadaas gaaraan aysan reer Hiiraan ka soo horjeedin laakinse xaqiiqda dalka ka jirto bulshada Hiiraan ha isweydiiso filo war bixino dhawaan.
Markaad intaas isweydiiso hadaad tahay reer Hiiraan aqligaada la gaasho. hoos ka aqri hashiiska reer Mudug.
· admin on September 14 2011 10:37:52 · 0 Comments · 2105 Reads ·
14,599,877 unique visits